China Sothis iklasi 2 biosafety ikhabhinethi Uhlobo B2 umzi-mveliso kunye nababoneleli |OKU
Ikhabhinethi ye-Sothis ClassⅡB2 biosafety cabinet yenzelwe ukuphathwa ngokukhuselekileyo kwezinto ezinobungozi obuphantsi ukuya kobuphakathi kwiilabhoratri nakwezinye iindawo.Ikhabhinethi ye-biosafety iphelisa ukungcoliseka, ukukhululwa kwee-microorganisms ze-pathogenic okanye i-aerosols ye-carcinogenic kunye nezinye izinto ezisulelayo kwi-atmosfera yangaphandle.
Udidi lwe-II, Uhlobo lwe-B2 ikhabhinethi ye-biosafety yiyunithi ye-100% epheleleyo.Luhlobo lwezixhobo ezikhuselayo zebhayoloji ezibonelela ngokhuseleko kumsebenzisi, imveliso kunye nokusingqongileyo kwi-particle, igesi / umsi kunye neengozi ze-aerosol.Indawo yokusebenza yekhabhinethi ye-biosafety ihlanjwa ngokuqhubekayo ngomoya ococekileyo nge-HEPA filter ukukhusela imveliso ekungcoleni ngelixa i-airflow yangaphakathi ihlala iphantsi koxinzelelo olubi, umqhubi kunye nokusingqongileyo akubonakali kwizinto ezinobungozi be-biological.Wonke umoya ongena kwi-hood utsalwa / uphuma ngaphandle kwesakhiwo.
I-1.ISO 4 / i-Class 10 ye-HEPA filter isusa izinto eziphilayo kwaye idibanise i-0.3 micron ngobukhulu kunye nokusebenza kakuhle kwe-99.999%.
I-2.Itanki yangaphakathi, itanki yamanzi kunye ne-tray zonke zenziwe nge-304 yensimbi engenasici.I-tray yensimbi engenasici nayo ingasuswa kwikhabhinethi ye-biosafety ukuze kube lula ukucoca.Inxalenye engezantsi yetanki yokuqokelela ixhotyiswe nge-interface ye-sewage yokucoca lula kunye ne-disinfection.
I-3.Umlenze wokuxhasa ulula ekuyilweni kwaye awunayo imicu ecacileyo, ekwazi ukulungelelanisa izinga kunye nokuzinza kwekhabhinethi ye-biosafety.
4.Ifestile yangaphambili ithatha iglasi epholileyo kunye nombono ocacileyo kunye ne-disinfectant ayichaphazeli kakubi.Xa isetyenziswe ngumqhubi, indawo inokulungiswa ngokukhululekileyo kwaye kulula.
5.Iikhabhinethi zethu ze-biosafety zenziwe nge-ergonomically kunye ne-10 degree degree tilt angle ukunika abasebenzisi induduzo ephezulu kunye neziphumo ezibonakalayo.
I-6.Inkqubo yokubeka iliso yokhuseleko: Xa ifestile yangaphambili iphakama ngaphezu komda wokhuseleko we-200mm, kuya kubakho isandi kunye ne-alamu yokukhanya.
7.Le Class II, Uhlobo lwe-B2 yekhabhinethi ye-biosafety yiyunithi ye-100% epheleleyo.I-BTE kufuneka ikhutshwe (ifakwe umoya) ukuya ngaphandle kwesakhiwo njengoko kungekho kwaphela ukujikelezwa komoya kwikhabhinethi.Eli nqaku lilonke elikhuphayo lenza ukuba i-hood ye-B2 ifaneleke kuphela ukuphatha i-particulates, kodwa kunye ne-fumes kunye neegesi.
I-8.Isixhobo sokukhusela isibane se-UV esakhelwe ngaphakathi sikulungele ukukhupha iintsholongwane ngaphakathi kwikhabhinethi yokhuseleko.
Ngaphambili: I-Ceiling Laminar Flow Hood
Okulandelayo: Ishawari yomoya ecocekileyo yeGumbi idlula kwiBhokisi
TDS -SX-BHC-1000, 1300 A2,B2 Sothis kwiKhabhinethi yoKhuseleko lwebhayoloji
Thengisa iPhepha -IKhabhinethi yeKhabhinethi ye-Biosafety iClass II B2
Iinyawo ezi-4 zekhabhathi yokhuseleko lwendalo
Iinyawo ezi-6 zekhabhathi yokhuseleko lwendalo
iklasi ye-2 yokhuseleko lwebhayoloji
iiklasi zekhabhathi yokhuseleko lwebhayoloji
IKhabhinethi yoKhuseleko lwendalo B2
Iimpawu zekhabhathi yokhuseleko lwebhayoloji
ulungelelwaniso lwekhabhathi yokhuseleko lwendalo
iklasi 2 yokhuseleko lwebhayoloji
Iklasi ye-biosafety cabinet 2 a2
Iklasi yokhuseleko lwebhayoloji kwikhabhinethi ii chwetheza a2 ukucaciswa
Ikhabhinethi yokhuseleko lwebhayoloji eIndiya
abavelisi bekhabhathi yokhuseleko lwebhayoloji
Iintlobo zeKhabhinethi yoKhuseleko lwendalo
iklasi 1 vs iklasi 2 ikhabhinethi yokhuseleko lwebhayoloji
iklasi 2 uhlobo a2 ikhabhinethi yokhuseleko lwebhayoloji
IKhabhinethi yoKhuseleko lwebhayoloji yeClass Ii
IKhabhinethi yeClass Ii Biosafety
I-laminar flow hood vs i-biosafety cabinet
ikhabhathi ephathwayo yokhuseleko lwendalo